Xasan Jabhad: Jaahwareerka Addis iyo kala daadsanaanta Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) (dhegayso) – Radio Daljir
Maarso 14, 2019 1:41 b 0
Aqoonyahan Xasan Cabdilaahi Ducaale (Xasan Jabhad) oo ah halgamaa taariikh dheer ku leh halgankii xoreynta Soomaali Galbeed kana soo qaybqaatay welina qayb ka ah ololaha xornimo doonka waxa uu sannadkii 1977 isaga oo 16 jir ah ku biiray Jabhaddii Xoreynta Soomaali Galbeed (WSLF). Xiligaas Xasan waxa uu ahaa ardey, kamana uu baqin in uu qorigana garabka surto oo uu halganka duurka u galo.
Xasan waxa aan ka waraysanay dagaallo muddooyinkaan ka socday gobolka Soomaali-Galbeed ee Dowlad Deegaanka Soomaalida “DDS” una dhexeeya Soomaalida deegaanka iyo Oromo dullaan ku ah deegaanka Soomaalida. Soomaalida deegaanka ayuu Xasan Jabhad sheegay in lagu hayo dil iyo dhac-iyo-boob aan loo meel dayin si looga ciribtiro deegaankooda.
Hoos kaga bogo oo fadlan nala qaybso faallo iyo falcelisba.